Mfe Nyefee ekwentị kọntaktị n'etiti Android, iOS na Symbian
> Resource> Nyefee> otú nyefee ekwentị kọntaktị n'etiti Android, iOS na Symbian
Ụbọchị ndị a, ndị mmadụ na-agbanwe ha igwe ugboro ugboro na ha oké mkpa nke na-ebufe ekwentị kọntaktị n'etiti ekwentị abụọ. E nwere ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ na nkọ na-eme ya.
Ekwentị contracts ịbụ n'elu, ekwentị ọrụ na-ekpebi họrọ ọzọ ụgbọelu banye na ekwentị ọzọ nkwekọrịta.
Ụfọdụ ọrụ ndị dị elu na-achụ ọhụrụ nkecha na jụụ igwe. N'ihi ya, ha na-emekarị okporo mmiri ochie ha ntị n'ihi na ọhụrụ.
The igwe na-agbajikwa ma ọ bụ zuru.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike họrọ ime kọntaktị transfer site iCloud ma ọ bụ mmekọrịta na kọntaktị ekwentị na Gmail na Outlook, na ụzọ abụọ na-adịghị mma. Ọ pụrụ ihihi gị onwe ozi.
Ụzọ kasị mma idetuo kọntaktị ekwentị bụ iji onye n'etiti ngwá ọrụ na nke ị nwere ike ozugbo detuo kọntaktị site na otu ekwentị ọzọ. Wondershare MobileTrans Dị otú ahụ a bara uru ekwentị transfer ngwá ọrụ. Ọ na-enyere gị ka ị na kọntaktị transfer n'etiti ekwentị mkpanaaka na-agba ọsọ Android, Symbian na iOS ke kiet ke otu click. Ọ bụrụ na ị bịanyere aka na akaụntụ, dị ka iCloud, Yahoo! na Facebook na gị isi iyi ekwentị, MobileTrans ga-agafeta ha na ebe ekwentị dị ka mma.
Nyefee na ekwentị kọntaktị n'etiti Android, iOS na Symbian igwe
Download MobileTrans ma na-eme nyefe dị ka ndị nduzi na-agwa gị. Ọ bụ nnọọ mfe. The screenshots n'okpuru bụ banyere nyefe si Nokia (Symbian) na iPhone. The Nkuzi banyere ndị ọzọ na ekwentị na-enyefe gụnyere enyefe si Symbian ka Android, Android ka iPhone, wdg bụ nnọọ yiri.
Nzọụkwụ 1. Launch MobileTrans mbụ
Na-amalite na, malite a na ekwentị transfer ngwá ọrụ mgbe wụnye ya. Bụ isi window ga-gbapụta. Gaa na ekwentị ekwentị Nyefee na pịa Malite.
Cheta na: Ọ na-akwado 2,000+ igwe dabeere Android, Symbian na iOS gụnyere Apple, HTC, Motorola, Nokia, Samsung, Sony, na Ọzọ!
Nzọụkwụ 2. Jikọọ ekwentị abụọ na-agba ọsọ Android / iOS / Symbian na kọmputa
Mgbe ahụ, jikọọ gị ekwentị abụọ ka compute. Ozugbo ha na-njikọ, MobileTrans ga chọpụta ha ozugbo. Dị ka ị na-ahụ, na ihe nwere ike depụtaghachiri na-akara. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ nyefee kọntaktị, wepụ akara tupu ndị ọzọ kwekọrọ ekwekọ ihe.
Ị nwere ike pịa "Clear data tupu oyiri", ma ọ bụrụ na ị chọrọ efu nke ekwentị akwụkwọ na ị na-aga na ekwentị.
Cheta na: The aha nke gị ntị ga-egosipụta na ebe nke "Isi Iyi" na "Destination". Ị nwere ike pịa "tụgharịa" n'etiti ekwentị abụọ na-agbanwe ha ebe.
Nzọụkwụ 3. Olee otú ka mfe nyefee kọntaktị n'etiti ekwentị abụọ
Ugbu a, pịa "Malite Copy" na-eme ndị nyefe. N'oge kọntaktị transfer ọganihu, na-gị ma igwe ejikọrọ oge niile.
Ka a dị ike ekwentị transfer ngwá ọrụ, MobileTrans-enyere gị aka nyefee dị ọtụtụ dị ka kọntaktị, ozi ederede, oku na ndekọ, photos, music, videos na égwu mfe na conveniently. E wezụga, ọ bụ a mma usoro. Na ya, gị mgbe mkpa ka nchegbu banyere adịkwa ọ bụla data. Download ya, ma ị ga-ahụ ihe uru banyere ya.
Otú nyefee Ndi ana-akpo, Music, Photos, Videos & SMS si Nokia ka iPhone
2 Ụzọ Nyefee Data si HTC ka LG G3
SharePod maka Mac - Nyefee Music na site na iPod / iPhone / iPad
Olee otú iji tọghata Video ka Blackberry ekwentị na Mac / Windows